သင်သတိမပြုမိပါက သင်နှင့်သင့်ကားကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ကားအောက်ပိုင်းရောဂါလက္ခဏာများ
ကားရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာရယ်လို့ဆိုလိုက်ရင် တော်တော်များများက အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂီယာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်ဂျင်ရောဂါပိုင်းဆိုင်ရာတွေက ဖြေရှင်းရခက်ခဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပေမယ့် သင့်ကားနဲ့ သင့်ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်အထိအကြီးမားဆုံး ဒုက္ခပေးနိုင်တာကတော့ suspension ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ သင့်ကားအောက်ပိုင်းရောဂါတွေပါ။
အဝေးပြေးလမ်းကြောင်းခရီးသွားဖို့ရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကားကို မိုင်နှုန်းမြင့်မောင်းတော့မယ်ဆို ကားအောက်ပိုင်းတွေကို အဓိက စစ်ဆေးကြရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့ကားတစီးဟာ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ရုတ်တရက်စက်ထိုးရပ်သွားရင် သင်ခရီးလမ်းမှာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်၊ ယုတ်စွအဆုံးအင်ဂျင်တစ်လုံးလဲလိုက်ရတာကလွဲလို့ ကျန်တာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကားအောက်ပိုင်း
suspension ပိုင်းက ပစ္စည်းတွေပျက်နေတာသတိမပြုမိလို့ ကားမောင်းနေတုန်း ပြုတ်ထွက်သွားမယ်၊ ကျိုးပဲ့သွားမယ်ဆိုရင် သင့်ကားမှောက်သွားနိုင်ပြီး သင့်အသက်အန္တရာယ်အထိ ထိခိုက်လာနိုင်ဖွယ်တွေရှိနေလို့ပါ။
ဒါကြောင့် သင်နဲ့သင့်ကားရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှု safety အတွက် သင်ကိုယ်တိုင် သတိပြုနိုင်တဲ့ ကားအောက်ပိုင်းရောဂါလက္ခဏာတွေကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြပေးပါ့မယ်။
ကားအောက်ပိုင်း (suspension) ကိုအဓိကအားဖြင့် အောက်ပါပစ္စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
(Tie rod) တိုင်းရော့
၊ (tie rod end or rack end) မိန်းလုံး၊
(ball joint) ဘောလ်ဂျွိုင့်
၊ (constant velocity -CV Joint) ဒူးဆစ်၊
(stabilizer bar) နှုတ်ခမ်းမွှေးလိုင်း၊
(shock absorber) ရှော့ခ်ဘား၊
(upper arm) အပေါ်လက်ဝါး၊
(lower arm) အောက်လက်ဝါး၊
(coil spring ) ကွိုင်စပရင်၊
(rubber bushing ) ရာဘာဘွတ်၊
(bellows ) သဲကာ အစရှိတဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကားအမျိုးအစား မော်ဒယ်အမျိုးအစား ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ပိုင်းပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေအများကြီးထပ်ဆောင်း ပါဝင်တာမျိုး ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ အဓိကတွဲဖက်အလုပ်လုပ်နေတာကတော့ (brake system) ဘရိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တာယာတွေပါ။
(၁) တိုင်းရော့ (tie rod)နဲ့ မိန်းလုံး ( tie rod end or rack End ) မကောင်းရင် ဘယ်လို ရောဂါလက္ခဏာတွေပြမလဲ?
တိုင်းရောနဲ့ မိန်းလုံးမကောင်းရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာကတော့ သင်ကားကို အရှိန်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒါမှမဟုတ် ကားကိုရုတ်တရက်ထောင့်ချိုးကွေ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ
အရှေ့ဖက်အစွန်ဆုံးဆီကနေ "ဒုတ်ဒုတ်" နဲ့မည်သံထွက်လာမယ်၊ လာထုနှက်တဲ့အသံမျိုးထွက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ကားရဲ့ တိုင်းရော့နဲ့ မိန်းလုံးတွေချို့ယွင်းနေပါပြီ။ နောက်တစ်ချက်က သင်ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တို့၊ ကားဘရိတ်အုပ်လိုက်တဲ့ အချိန်တို့မှာ ကားကတစ်ဖက်ဘက် ကိုဆွဲနေမယ်၊ ဒါ့အပြင် ကားတာယာတွေက အတွင်းဖက်ကိုဖြစ်စေ အပြင်ဖက်ကိုဖြစ်စေ ဘက်မညီမမျှစားသွားမယ် ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒါ တိုင်းရော့နဲ့ မိန်းလုံးမကောင်းတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ တိုင်းရော့နဲ့ မိန်းလုံးဆိုတာကတော့ကားအောက်ပိုင်းမှာ ပျက်စီးမှုအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရော့ကျိုးလို့၊ ပြုတ်ထွက်လို့ တောင်တက်တို့၊ အဝေးပြေးတို့မှာ အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အထိ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ ကားတွေရှိဖူးပါတယ်။
ဒီတော့အခုဖော်ပြထားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာလေးတွေ တွေ့ရင်၊ မြင်ရင်၊ ကြားရင် ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးမှုမဖြစ်ခင် ဝပ်ရှော့သွားပြီး တိုင်းရော့နဲ့ မိန်းလုံးကို အသစ်လဲတန်လဲ၊ press ခုံမှာ နင်းပြီး ပြန်သုံးတန်သုံးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
(၂) Ball joint မကောင်းရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေပြမလဲ?
Ball joint မကောင်းရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက သင့်ကားအောက်ဘက်ထောင့်ဆီကနေ တစ်ချက်တစ်ချက်၊ အသံခပ်မျှဉ်းမျှဉ်း ထုနှက်သံမျိုးတွေထွက်တတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်းအတိမ်းအစောင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေတို့၊ ချိုင့်ခွက်တွေထဲတို့ မှာမောင်းလိုက်တဲ့အခါ အဲ့အသံက ထွက်လာတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါ ball joint မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ပြောရရင် သံကိုတူနဲ့ထုတဲ့အသံမျိုးနဲ့ဆင်ပါတယ်။ Ball joint က သင့်ကားဘီးရဲ့ ဘယ်ညာအကွေ့အထိန်းတွေမှာ အဓိက ထိန်းပေးထားတာမလို့ ball joint မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ သင့်ကား စတီယာရင် (steering) ကိုလာပြီး သက်ရောက်မှုတွေရှိလာပါမယ်။ ဖြစ်လာနိုင်တာက သင့်ကား စတီယာရင် မာပြီးလှည့်ရတာခက်သွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းပေါ့ရွှတ်ပြီးထိန်းရခက်သွားမယ်။ လမ်းအဖြောင့်မောင်းနေရင်းက အနိမ့်ပိုင်းကိုဆင်းလိုက်ရင် သင့်စတီယာရင် လက်ကိုင်ခွေကိုလာတိုးတာမျိုးတွေဟာ ball joint မကောင်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေပါ။ အခြားရောဂါလက္ခဏာကတော့ တိုင်းရောမိန်းလုံးတို့လိုပဲ တာယာအတွင်းအပြင်မညီမညာစားသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၃) (Constant Velocity -CV joint) ဒူးဆစ် မကောင်းရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေပြမလဲ?
ဒူးဆစ်လက္ခဏာကတော့ သိသာထင်ရှားပါတယ်၊ သင့်ကား ဘယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ညာကိုဖြစ်ဖြစ်ကွေ့လိုက်လို့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြိတ်ဝါးနေသလို "ကလစ် ကလစ်၊ တောက်တောက်တောက်၊ တက်တက်တက်" အသံတွေထွက်လာတယ်၊ ကွေ့တိုင်း အဲဒီလိုအသံတွေထွက်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါ ဒူးဆစ်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာရပ်ပါ။ နောက်ဒူးဆစ်ဘောတွေကို ထိန်းထားတဲ့ကလစ်ပြုတ်ထွက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ကားက ဂီယာဘယ်လိုထိုးထိုး ဂီယာဖရီးလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မနေ့ကပဲ ကားတစ်စီး ဒူးဆစ်ဘောကိုထိန်းထားတဲ့ကလစ်ပြုတ်ပြီး ဝပ်ရှော့ကိုကြိုးနဲ့ဆွဲလာရပါသေးတယ်။
(၄) Shock bar ၊ coil spring ၊ struts မကောင်းရင် ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေပြမလဲ?
ဒီအပိုင်းတွေမကောင်းရင်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေက သိသာထင်ရှားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်းအနိမ့်အမြင့် မညီမညာဖြစ်တဲ့နေရာတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ချိုင့်ခွက်တွေထဲ မောင်းတယ်အခါ ငြိမ့်ညောင်းညင်သာမှုမရှိတော့ဘဲ အောက်ဘက်ကနေ ပြင်းထန်စွာလာစောင့်နေတာမျိုးတွေကို သိသာထင်ရှားစွာခံစားရပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါ shock bar ၊ coil spring ၊ struts တို့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာရပ်ပါ။ ရှော့ဘားတွေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးက သင့်ကားကိုယ်ထည်တစ်ခု
လုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ယိမ်းနွဲ့စေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက တစ်ချို့ရှော့ဘားမှာဆိုရင် ဆီတွေယိုကျတာတို့၊ ရှော့ဘားကအောက်ကိုကျပြီး အပေါ်ကို ပြန်ကန်မတက်တော့တာမျိုးတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၅) ကားတစ်ဖက်ဘက်ကိုဆွဲနေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပြရင်
ကားတစ်ဖက်ဘက်ကို ဆွဲနေတဲ့ရောဂါလက္ခဏာပြရင်ဖြစ်နိုင်တာတွေက တာယာလေနဲနေတာ၊ တာယာ လေပေါင် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တာယာလေပေါင်အရင်စစ်ဆေးရပါမယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတစ်ချို့မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ တာယာလေပေါင်မညီရင် dashboard မှာ လေပေါင်မညီတာကိုပြတဲ့ မီးလင်းပါတယ်။
တာယာ တစ်ဖက်ဘက်စားနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တာယာတစ်ဖက်ဘက်မညီမညာစားနေလား ရှေ့နောက်ဘေး သေချာစစ်ဆေးရပါမယ်၊ မညီမညာဖြစ်နေရင် ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စစ်ဆေးပြီး အသစ်လဲတန်လဲရပါမယ်။ ကားအလိုင်းမင့် (alignment) မညီမညာဖြစ်တာမျိုးကနေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလိုင်းမင့်ချိန်တဲ့ဆိုင်တွေမှာ သေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ တိုင်းရော့တို့၊ မိန်းလုံးတို့မကောင်းတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကားအောက်ပိုင်းပြုပြင်ရေးဆိုင်တွေမှာ ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။
(၆) ဘရိတ်နင်းရတာထိုင်းနေမယ်၊ ကပ်နေမယ် (ဝါ) လျောနေမယ်၊ ဘရိတ်အုံတွေအရမ်းပူနေမယ်၊ ဘရိတ်ကလစ်နဲ့ ဘရိတ်ဒရမ်နဲ့ ပွတ်တဲ့ "ဂျစ်ဂျစ်ဂျစ်" ဆိုတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာပြရင်
Break pads တွေကုန်နေတာ၊ ဘရိတ်ပစ်စတင်တွေ ဂျမ်းဖြစ်နေတာ၊ ဘရိတ်ရှူးလျော့နေတာ၊ ပင်တွေသံချေးတက်ပြီးကိုက်နေတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၇) စတီယာရင် လှည့်ရတာချော်နေမယ်၊ သင် စတီယာရင်ကို လှည့်တဲ့အခါဖြစ်စေ၊ လှည့်ထားတဲ့အတိုင်းလေးထိန်းတာတဲ့အခါဖြစ်စေ၊ စတီယာရင်က ချော်ထွက်နေမယ် ဒါမှမဟုတ် လှည့်ဖို့ခက်ခဲနေမယ် ဆိုရင်
Steering fluid နည်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ steering belt ကြိုးလျော့နေတာ ဒါမှမဟုတ် ပွန်းစားနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Steering pump မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Steering pump က O-ring ပျက်ပြီးဆီယိုနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ EPS ဆိုတဲ့ electric power steering စနစ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ဆီမပါတဲ့ မော်တာနဲ့လည်ပတ်တဲ့စနစ်တွေများလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်မြင့် EPS စနစ်မှာတော့ EPS စနစ်ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့ ဒိုင်ခွက်မှာ EPS အချက်ပြ မီးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ကားတစ်စီးမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြေခံအောက်ပိုင်းရောဂါလက္ခဏာရပ်တွေပါ။ အခြားအခြားသော ကားအောက်ပိုင်းရောဂါတွေအများကြီးကျန်ရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက လမ်းတွေမကောင်းတာရယ်၊ နောက် used ကားတွေသာများတာရယ်ကြောင့် ကားအောက်ပိုင်းရောဂါတွေကတော့ အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကားတွေမှာဆို ဒူးဆစ်တို့၊ မိန်းလုံးတို့၊ ဘောဂျွိုင့်တို့၊ တိုက်ရော့တို့ကို အုပ်ထားတဲ့ သဲကာလေးပေါက်တာကို မလဲတာကနေပြီး အဲဒီအရာတွေကြားထဲမှာနေရမယ့် အမဲဆီတွေအပြင်ထွက်၊ အထဲမှာမရှိရမယ့် သဲတွေ၊ ဖုန်တွေ၊ ရွှံ့တွေက အထဲဝင်ကုန်တော့ အောက်ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ပျက်စီးစေတာမျိုးလည်း မကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။
အောက်ပိုင်းက လင့်တွေ၊ bushing တွေ မကောင်းတာကြောင့်လည်း အထက်က ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုက အထက်ပါရောဂါတွေက တစ်ခုချင်းဖြစ်နိုင်သလို၊ နှစ်ခုကနေ အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကားပေါ်တက်လိုက်လို့ အောက်ပိုင်းကနေ သံစုံတီးဝိုင်းသံတွေကြားနေရရင်တော့ သင့်ကားအောက်ပိုင်းတော်တော်များများပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ စစ ဖြစ်ခြင်းရောဂါလက္ခဏာတွေကို သတိမမူဘဲ မပြုပြင် မထိန်းသိမ်းရင် အောက်ပိုင်းအခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုပါ လိုက်ပါပျက်စီးစေပြီး အနည်းဆုံးတာယာစားသွားတာ၊ ကားမောင်းရတာ မငြိမ့်တော့ဘဲ အသံတွေထွက်လာတာကနေ အဆိုးဝါးဆုံး သင့်အသက်အန္တရာယ်ထိအောင်တောင် ထိခိုက်စေမှာပါ။
ဒါကြောင့်သင့်ကားအောက်ပိုင်းကနေ မူမမှန်တဲ့ အသံတွေ တုန်ခါမှုတွေကို သတိထားပြီး ရောဂါလက္ခဏာပြပြီဆိုတာနဲ့ သင်နဲ့သင့်ကားဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံရေးအတွက် ချက်ခြင်း ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ စစ်ဆေးပြသပြီး ရောဂါကုသမှုခံယူသင့်ကြောင်း အကြုံပြုတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတတိုးတက်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေ။
စာရေးသူ : Lynn Za Nee (P.T.U)
Lynn Za Nee (P.T.U)
ကမ္ဘာကျော် ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား သူတိုရဲ့ကားများ
CarsDB မှကြီးမှူးကျင်းပသော Auto Show Mandalay 2019 အတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို Hilton Mandalay Hotel ၌ကျင်းပပြုလုပ်